I-NC State GPA, i-SAT kunye neMfuneko yeeMfuno zeMvume yokungena
Izibalo zeeNkcukacha zeeNkqubo zeNC
Funda ngeYunivesithi yaseNorth State State and What It takes to Get In
Ngokwamazinga okwamkelwa ngama-48 ekhulwini, iNyuvesi yaseNorth Carolina State iyona yunivesiti ekhethiweyo yoluntu. Abafundi baya kuthi badinga ngaphezu kwamabanga amabakala aphezulu kunye namanqaku okuhlolwa amiselweyo ukuba avunyelwe. Iyunivesithi inenkqubo yokumkelwa ngokubanzi kwaye iqwalasela izinto ezibandakanya i-GPA yakho, iikhankathi zeeklasi zakho eziphakamileyo, izikolo zakho ezikhethiweyo, ii-SAT okanye ii-ACT, ukubandakanyeka kwakho kwangexesha elilodwa, igalelo lakho kwi-diversity campus kunye nelifa lemveli.
Kutheni Unokukhetha IYunivesithi YaseNorth State State
Eyasungulwa ngo-1887 kwaye ifumaneka eRaleigh, i-NC State ngoku iyona yunivesithi enkulu eNorth Carolina. Kuzo zonke iikholeji ezenza i-NC State, Ubunjineli, uLuntu / iNzululwazi yezeNtlalo, kunye nezoLimo / iiSayensi zeNtlalo zinabhaliso abaphezulu be-undergraduate. I shishini liyaziwayo. Amandla kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi azuze isikolo isahluko se- Phi Beta Kappa . Kwinqanaba likazwelonke, i-NC State isoloko ifumana amanqaku aphakamileyo ngokuxabisa kwayo, kwaye i-yunivesithi isebenza kwiikholeji eziphezulu zeNorth Carolina kunye neikholeji eziphezulu ze-Southeast . Abadlali be-Athletics bakhulu kwi-NC State, kwaye i-stadium ye-yikiti ye-60 000 yebhola yebhola yebhola ephantse ihlala ithengisa. I-NCSU Wolfpack iyilungu elisekwayo kwiNkomfa yeNxweme ye- Atlantic .
NCSU GPA, SAT kunye ne-ACT Graph
I-North Carolina State University GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Jonga i-graph time-time kwaye ubale amathuba akho okungena kwiCappex.
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions ye-NCSU
Phantse isiqingatha sabo bonke abafundi abasebenzisa iNyuvesi yaseNorth State State bayamkelwa, kwaye abafaki-sicelo abaninzi abaphumeleleyo banamabanga aphezulu kunye neSAT / ACT amanqaku. Kwi-scattergram apha ngasentla, amachaphazi aluhlaza kunye namabala aluhlaza amele awamkele abafundi. Uyabona ukuba abafaki-zicelo abaninzi abaphumeleleyo babe ne "B +" okanye amazinga aphezulu, amanqaku e-SAT malunga ne-1100 okanye ngaphezulu (RW + M), kunye ne-ACT amaqela angama-23 okanye ngaphezulu. Amanani aphakamileyo ngokucacileyo aphucula amathuba akho okufumana ileta yokuwamkela, kwaye uyabona ukuba uninzi lwabafakizicelo abane-"A" nemilinganiselo ephezulu yokuvavanywa kwamkelwa.
Qaphela ukuba kukho amachaphaza abomvu (abafundi abatshitshisiweyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) abafihliweyo emva kohlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka, ingakumbi phakathi kwegrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni ayejoliswe kwi-NC State awazange angene. Qaphela kwakhona ukuba abanye abafundi bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku athile ngaphantsi kwesiqhelo. Abantu abamkelweyo bathatha ingqalelo kwiimeko eziphakamileyo zezikolo zenu eziphakamileyo , kungekhona nje i-GPA yakho. Ezinye izinto ezinokuthi zenze isigqibo se-admissions ziquka inkcazo yakho yokuzikhethela, imisebenzi yangaphandle , amava okhokelo kunye nenkonzo yoluntu. Kwaye, ewe, kuba i-NC State iCandelo le-NCAA i-yunivesithi, ukugqwesa kwizemidlalo kunokudlala indima ebalulekileyo kwi-equation equation.
I-North Carolina State University I-Acceptance Rate: 48%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 570/660
ISAT Math: 600/690
UMTHETHO WOMTHETHO: 26/31
UMSEBENZI IsiNgesi: 25/32
Olunye ulwazi lweNyuvesi yaseNorth Carolina State
Amanqaku okuhlolwa kunye namabakala afanelekileyo kubaluleke kakhulu kwinkqubo yokungeniswa kweNC, kodwa ezinye izinto kufuneka zidlale indima kwinkqubo yakho yokukhetha iikholeji. Idata apha inokukunceda.
Ubhaliso lwabonke: 33,755 (i-23,827 izifundo zakudala)
Ukuhlukana kwesini: 55% Amadoda / 45% Abasetyhini
88% Ixesha elipheleleyo
Imfundo kunye neMali: i-$ 8,880 (kwi-state); $ 26,399 (ngaphandle kwimeko)
Iincwadi: $ 1,082 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 10,635
Ezinye iindleko: $ 2,442
Iindleko ezipheleleyo: i-23,039 i-$ (kwi-state); $ 40,558 (ngaphandle kwemeko)
Uncedo lwezeMali kwiNyuvesi yeNtshona kaRhulumente (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 69%
Izibonelelo: $ 10,353
Imali: $ 6,383
I-Popular Majors: I- Accounting, i-Biology, uLawulo lwezoShishino, iZifundo zoNxibelelwano, Ubunjineli bombane, Ubunjineli boMbane, iNzululwazi yezobupolitika, iNzululwazi, iiSpetile Sciences
Ukukhutshwa kwezinga lokuphuma: 9%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka engama-4: 48%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 78%
Imidlalo Yezemidlalo: Ibhola lebhola, Ibhola, ibhola lebhola, ibhokhwe, ilizwe eliphambeneyo, Ukubhukuda, ukulwa
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Gymnastics, i-Soccer, Ukubhukuda, iThatyati, iGalofu, ilizwe eliphambeneyo
Ukuba uthanda iYunivesithi yeNorth State State, Unokuthi Ungathanda Ezi Zikolo
Abafakizicelo abaninzi kwiNyuvesi yaseNorth State State basebenzela amanye amaziko emnxantathu wophando likarhulumente: UNC Chapel Hill neYunivesithi yaseDuke . Qaphela ukuba zombini izikolo zikhethwa ngaphezu koRhulumente weNC.
Ezinye iikoyunivesithi zikarhulumente nazo ziyaziwayo phakathi kwabafakizicelo belizwe be-NC. Ezi ziquka UNC Pembroke kunye ne- UNC Greensboro . Zombini zikhethi zincinci ngaphezu koRhulumente weNC. Kukhetho lwe-out-of-state, khangela iYunivesithi yaseVirginia , iYunivesithi yaseGeorgia kunye neYunivesithi yaseFlorida State . Zonke ezi zintathu ziiyunivesithi ezinkulu zikarhulumente ezineenkqubo eziqinileyo zemfundo kunye nobomi bokufunda.
> Umthombo Weenkcukacha: Iigrafu ngokukhawuleza zeCappex; zonke ezinye iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo.
Izibalo zeeNyuvesi zeColorado
I-Grand Valley State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yasePortland GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Isikolo se-UNC soBugcisa iGPA, iSAT kunye ne-ACT Data
I-University of Western Carolina GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Penn GPA, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT Scores
I-Rhodes College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ebbos eSanteria - Imihlatshelo kunye nemihlatshelo
"Umoya kwi-Willows" Quotes
Ukurekhoda Guitar Acoustic
Izizathu Ezifunekayo Ukuba Uphile KwiCampus Unyaka Wokuqala weKholeji
Ukuchaza iStableford Point System
Izithombe ze-Animal Totem: Savanna Totems
AbaPhambili baseMerika baseMerika eAfrika
Abantu abalulekileyo kwimbali yakudala yaseAfrika
Iimifanekiso zamaFree Free Online
I-London Underground ifika eNew York
Funda iNgxenye yegama lesiRoma
Indlela iNzululwazi Iyakulungiselela Ngayo Imisebenzi Yomhlaba Wezoshishino